Imizuzu ye-30 Ukwazi iNootropic Pramiracetam-AASraw
/Blog/Ithala/Imizuzu ye-30 Ukwazi iNootropic Pramiracetam-AASraw
ezaposwa ngomhla 03 / 07 / 2021 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Eli gama libhekisa kwimichiza yendalo okanye yokwenziwa enokuba nefuthe kubuchule bengqondo. Banokuba kukutya nezongezo, izinto zokwenziwa, okanye amayeza kagqirha. Imizekelo yamachiza amayeza e-nootropic yiRitalin, isikhuthazi esisetyenziselwa ukunyanga i-ADHD okanye iMemantine, iyeza lesifo sengqondo esixhalabisayo.
Abaxhasi bokuqonda ukukhulisa ubukrelekrele, ubuchule bokuyila, kunye nenkuthazo luluncedo olubalulekileyo kukhuphiswano lwanamhlanje. Unokubava bebizwa ngokuba “ziidrugs” kodwa zingaphezulu lee kunoko.
Igama elithi nootropic livela kwiingcambu zesiGrike: "nous", elithetha ingqondo, kunye ne "tropin", okuthetha ukujika okanye ukugoba (njengomlambo).
Iimpawu eziqhelekileyo zeNootropics
Ukuze ikhompawundi yamakhemikhali ithathelwe ingqalelo njenge-nootropic, kufuneka ihlangane neenqobo ezithile. Ngokubanzi, i-nootropic eyamkelekileyo
Iphucula iimpendulo phantsi koxinzelelo
Ikhusela ingqondo kwingozi yomzimba okanye yemichiza
Ukuphucula ulawulo lwecortical / subcortical
Inetyhefu esezantsi okanye iziphumo ebezingalindelekanga
Izinto ezenziwayo ezilandela ezi nqobo ziyilelwe kutshanje, kodwa izithethe zamandulo zase China nase India zibonisa ukusetyenziswa kwe-cannabis, i-ginkgo biloba, kunye namanye amayeza ngenxa yezi zizathu.
Kutheni iPramiracetam ithandwa?
I-Pramiracetam yinxalenye yosapho lwe-racetam, iqela lezihlanganisi zokwenziwa ezabelana nge-pyrrolidone nucleus. Iziyobisi kolu sapho zii-anticonvulsants, inkumbulo, kunye neziqinisi zoxinzelelo.
I-Pramiracetam ichaphazela ngokuqinisekileyo ukufunyanwa kweenkumbulo. Uphando lubonisa ukuba luyinkqubo yokhuselo. Ngokungafaniyo neziyobisi ezininzi kusapho lwe-racetam, ukusebenza kwayo kwavavanywa kubantu abadala abasempilweni. Uninzi lweekhompawundi ze-racetam zavavanywa kubantu abadala esele zehlile.
I-nootropic enamandla eneempembelelo ezihlala ixesha elide ezakha ixesha elingaphezulu. Obunye ubungqina bubonisa ukuba bunokunceda ngokwenzakala kwengqondo.
I-AASraw ngumenzi wobugcisa weNootropic Pramiracetam.
I-Pramiracetam (N- [2- [di (propan-2-yl) amino] ethyl] -2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) acetamide, CI-879, Pramistar, Neupramir, Remen) yi-nootropic enyibilikayo enamafutha. kwiklasi ye-racetam yeekhompawundi.
IPramiracetam (CAS: 68497-62-1) ibonakalisile ukuba iyasebenza kunyango lweengxaki zokuqonda kwengqondo kwimvelaphi ye-cerebrovascular kunye neyothusayo. Uvavanyo kubantu abanememori engalunganga lubonakalisile ukuba iPramiracetam iyakwazi ukuphucula inkumbulo. Nangona kungekho zifundo zingqina ukuba le yimeko yabantu abancinci abasempilweni, uninzi lwabo luxelwe ngokuziva ziziphumo zememori ephuculweyo kunye nokukhumbula. Inkcazo yokuba kutheni iPramiracetam inyusa inkumbulo, kukuba ibonakalisile ukuba inyuse ukufunyanwa okuphezulu kwe-choline.
Ngokwenzululwazi, uCholine imolekyuli eyandulelayo ye-neurotransmitter acetylcholine, efana kakhulu nevithamini kwaye sisondlo esibalulekileyo. I-Choline inokufumaneka kwezinye izityalo kunye nakwizitho zezilwanyana okanye kubisi. Ukuba nokutya okulinganiselweyo kwaye ke ubonelelo olwaneleyo lwe-choline kunye nokuxhasa ii-racetams ezinjengePramiracetam eyandisa ukuthathwa kwe-choline, inokuba nefuthe elihle kwimemori.
I-Pramiracetam yimolekyuli ye-racetam eyenziweyo enezakhiwo ezifanayo kwimolekyuli yomzali iPiracetam. Yayiqala ukwenziwa ngo-1984 ukubanakho ukuthintela i-amnesia evela kwi-electrocution. Xa kuthelekiswa namanye amalungu osapho lwe-racetam, iPramiracetam ayiphandwa kangako kodwa inobungqina bokuba iluncedo ebantwini.
Kwizifundo, iPramiracetam ibonakala ngathi iyasebenza xa ithathwa kuvavanyo lwangaphambi kwexesha olunokuthi lwenze ukuba kube lula ukuxhasa ngexesha loviwo okanye kwizigaba zomsebenzi apho imemori ephuculweyo kunye nemisebenzi yokuqonda iza kusebenza. Izifundo zoluntu ziyayixhasa le ngcinga kodwa aziboneleli ngobungqina obaneleyo ukuza kuthi ga kulo mhla.
Pramiracetam Indlela yokuSebenza
Njengazo zonke iiracetam, iindlela ezenziwa emva kwepramiracetam aziqondwa ngokupheleleyo, ikakhulu ngenxa yokunqongophala kophando olunzulu.
Nangona kunjalo, olunye uphando lwakwangoko lukhombe kwezi ndlela zilandelayo:
▪ Ngamana anganyusa amanqanaba e-acetylcholine (ngokwandisa ukufakwa kwe-choline kwiiseli nge-30-37%);
▪ Ingandisa imveliso ye-nitric oxide kwingqondo;
▪ Inokubandakanya iihomoni zeadrenal ezinje ngealdosterone kunye necortisol (corticosterone);
Nangona kunjalo, idatha malunga nezi ndlela zingentla iza ikakhulu kwizifundo zezilwanyana- ikakhulu kwiigundane kunye neempuku- kwaye ke akukho zigqibo zinamandla zinokwenziwa malunga neendlela ezinokubakho zepramiracetam kubuchwephesha babasebenzisi babantu abasempilweni.
IPramiracetam yi i-nootropic yokwenyani, Yenzelwe ngokukodwa ukuphucula ukuqonda. Izibonelelo kunye neziphumo zibandakanya oku kulandelayo:
I-Pramiracetam sisiqinisekiso sokukhumbuza inkumbulo, kuvavanywa ngokubanzi kumashumi aliqela eminyaka kwaye kubonisiwe kusebenza kuzo zombini izifundo zezilwanyana‍ kunye novavanyo lwezonyango kubantu abadala abancinci abanokuphazamiseka kwengqondo ngenxa yokwenzakala kwengqondo.
I-Pramiracetam iphucula inkumbulo kokubini ngokuvuselela i-hippocampus, icandelo lobuchopho ikakhulu elinoxanduva lokudala iinkumbulo ezintsha kunye nokusebenza njenge-anti amnesic enamandla yokunciphisa ukulibala. Abasebenzisi abaninzi banika ingxelo yokuphucuka okubonakalayo kwisantya sokukhumbula, ibango eliye laqinisekiswa zizifundo zezilwanyana
Isidima sePramiracetam njengesikhuthazi sokuqonda ngokubanzi esonyusa ukuphapha kunye nokwandisa amandla okufunda senze ukuba ibe lukhetho oludumileyo phakathi kwabafundi abafuna uncedo oluthembekileyo lokufunda.
Nangona kungekho zifundo zabantu kwezi ziphumo zichaziweyo, izifundo zezilwanyana zibonisa ukuba ipramiracetam inegalelo kwiindlela ezisisiseko sokufunda kunye nokuphuculwa kwememori ngokunyusa uhlobo lwe-neuronal uhlobo lwe-nitric oxide synthase (NOS) kwi-hippocampus. Iiplastikhi, zombini ezibalulekile kuzo zonke iinkalo zokuqonda.
I-Pramiracetam ikwayaziwa ngokwandisa ukufunyanwa okuphezulu kwe-choline kwi-hippocampus, yiyo loo nto ngokungathanga ngqo ikhuthaza imveliso ye-acetylcholine, i-neurotransmitter ebalulekileyo enxulunyaniswa kakhulu nokufunda kunye nokuqonda.
Uvavanyo oluvulekileyo lweelebhile kwizigulana ezinesifo sengqondo esixhalabisayo esibonisa ukuba iPramiracetam ibuyise ngempumelelo i-amnesia, ikhuthaza kakhulu ukukhumbula kunye nokunciphisa ukulibala.
Kwezinye izifundo, ezilinganise iimpembelelo zepramiracetam kunye nezinye ii-nootropics zeklasi ye-racetam kwizigulana ezinesifo sengqondo esixhalabisayo, kuya kubakho uphuculo olunokulinganiswa kulwazi kunye nememori. Ezi ziphumo zinokuthi zichazwe, ubuncinci kwinxalenye, yokuphuculwa kwe-nootropic yee-neurotransmitters ezikhoyo.
Nangona i-pramiracetam ingavunyelwanga njengonyango lwe-Alzheimer e-US, ihlala ichazwa eYurophu kunyango lwe-dementia kunye neminye imiba yokuqonda enxulumene nesifo se-Alzheimer kunye nokunye ukuphazamiseka kwemithambo-luvo.
Ngelixa kungekho phando lubhaliweyo malunga nefuthe le-pramiracetam kulungelelwaniso lwasentlalweni, uninzi lwabasebenzisi baxela ukuba lubenza babe nencoko yokuncokola kunye nokutyibilika ekuhlaleni. Esi siphumo sinokuchazwa, ubuncinci ngenxalenye, yipramiracetam eyaziwayo yokuchaphazeleka ngokweemvakalelo, ethi ngamanye amaxesha ichazwe ngokufana naleyo kaRitalin. Esi siphumo sinokunciphisa uxinzelelo lwentlalo kwaye, endaweni yoko, siphucule ukutyibilika koluntu.
I-Pramiracetam yaziwa ngokuba nefuthe elibonakalayo le-neuroprotectant, elikwaziyo ukuphucula ukuqonda kwabantu abanamava obunzima bengqondo.
Izifundo zikwabonakalise ukuba zinokubonakalisa ukusebenza kwe-neuroprotective xa zisetyenziswa ngexesha lotyando lwe-coronary bypass kunye nonyango lokuphazamiseka kwengqondo kwimvelaphi ye-cerebrovascular.
Pramiracetam Isisombululo sereferensi
Ipramiracetam ihlala iza ngohlobo lomgubo, iipilisi, okanye iipilisi. Abanye abasebenzisi baxela ukuba ifom yomgubo inencasa eyomeleleyo engathandekiyo, kwaye ke bakhetha ukusebenzisa iifomsile okanye iifom zethebhulethi endaweni yoko.
Ngokwabanye abaphandi, iifom kunye neefomule zefomsule zinokufumana inqanaba lokufunxa ngokukhawuleza kunefom yethebhulethi. Nangona kunjalo, amandla kunye nokusebenza okupheleleyo kukholelwa ukuba alingana ngokulinganayo kwiifom ezahlukeneyo.
Kwesinye sezilingo ezimbalwa esele zenziwe ukuza kuthi ga ngoku, idosi eyi-1,200 mg isetyenzisiwe, yahlulwe yangamanani amabini ama-600-mg okanye iidosi ezintathu ezingama-400-mg zisasazeka imini yonke.
Njengelungu losapho lwe-racetam yeziyobisi, i-pramiracetam kukholelwa ukuba ixhomekeke kwi-choline kwiziphumo zayo, kwaye ukuyisebenzisa kunokuthi, kuphelise ukubonelelwa kwe-choline yomzimba. Ngesi sizathu, ngamanye amaxesha kuyacetyiswa ukudibanisa iiracetam kunye nomthombo we-choline, njenge-alpha-GPC okanye i-citicoline. Nangona kunjalo, eli cebiso lisekwe kuphela kwidatha evela kufundo lwesilwanyana esinye, ke oku akufuneki kutolikwe njengalo naluphi na uhlobo “lwengcebiso” ezisemthethweni okanye ezamkelweyo kwezonyango.
Ulwazi olubalulekileyo: Pramiracetam Stack
I-Pramiracetam isebenza kakuhle iyodwa kodwa inokuba yinto enamandla yezinye ii-nootropics, inyuse ukusebenza kwazo.Iyona nto inokubangela ukuba isebenze ngakumbi kwezinye iiracetam, isenza ukongeza kwendalo kuninzi nootropic izitaki.
Ukongeza i-choline zongeza kwisitaki se-pramiracetam sinokuba nezibonelelo ezininzi. Ayisiyongokuphucula kuphela iziphumo ze-pramiracetam, kodwa inokuthi ithintele iintloko, ezizezona zixhaphakileyo zixhaphakileyo. .
Kwimizekelo emi-2 malunga Pramiracetam ukubeka:
❶ I-Pramiracetam kunye ne-Oxiracetam Stack
I-stacking pramiracetam ene-energy enhancer efana ne-adrafinil okanye i-oxiracetam inokuqinisa ukuphaphama kwengqondo kunye nokuyandisa ixesha elide.
IPramiracetam kunye ne-Aniracetam Stack
Ukugcina i-pramiracetam ene-arhente enamandla yokulwa noxinzelelo njenge-aniracetam inokunika abasebenzisi ukuphakama kokugxila kunye noxinzelelo ngelixa bephucula imeko kunye nokunciphisa iimvakalelo zengqondo kunye noxinzelelo. Abanye abasebenzisi bathi esi sitaki sikhuthaza ukutyibilika koluntu kwaye siphucula indlela yokusebenza koluntu.
Iziphumo zeS Pramiracetam Iziphumo
I-Pramiracetam ihlala inyamezeleka kakuhle nakwiidosi eziphezulu, kwaye zimbalwa kakhulu iziphumo ezibi ezichaziweyo.
Kukho iingxelo ezixhaphakileyo zeziphumo ebezingalindelekanga ezincinci kunye nezikhawulezileyo, kubandakanya intloko ebuhlungu, uxinzelelo lwesisu, kunye neemvakalelo zovalo okanye ukuphazamiseka.
Intloko enxulunyaniswa nokudodobala kwe-choline sisiphumo esisecaleni sohlobo lwe-racetam nootropics kwaye sinokuthintelwa ngokuthatha ipramiracetam ngokudibeneyo kunye ne-choline eyongezelelweyo.
I-Pramiracetam ayisiyomlutha, kwaye akukho ziphumo zibalulekileyo zokusetyenziswa kwexesha elide zibhaliweyo. Kukho ubungqina bokuba ipramiracetam inokuthi ikhuthaze impilo yengqondo kwaye ibuyisele nomsebenzi kwiingqondo ezigugayo.
Yeyiphi eyona ndawo yokuthenga Pramiracetam Kwi-Intanethi?
Ngelixa kuyinyani ukuba iPiracetam yenye yezona nootropics zithembisayo, inezifundo ezimbalwa zonyango kwaye uninzi lwayo, ukuba alubhalwanga umhla, zezifundo zophando olusekwe kwizilwanyana kunye nophando. Eyona nto iluncedo kakhulu kubantu abadala abakhubazeke ngengqondo kodwa kukwakhuthazwa ukuba kuthathwe ngabantwana kunye nabantu abadala abancinci ngokuhambelana neemfuno zabo. Kukhuselekile ukusebenzisa ngelixa kusebenza kuphela xa kubanjiswa nezinye nootropics.
Zininzi iindawo ezinePiracetam ezithengiswayo kwi-Intanethi. Nangona kunjalo, kungcono ukuthenga kwiwebhusayithi ehlangabezana nemigangatho esemgangathweni kule ntsimi. AASraw ngumthengisi onokuthenjwa weNootropics, zonke iimveliso zazo ziveliswa phantsi kwe-cGMP kwaye umgangatho unokulandelwa nangaliphi na ixesha, ngokokwazi kwethu. Unokuqwalasela malunga nabo ukuba ufuna ukuthenga iPramiracetam powder.
Inokuthengwa ngcono kulo mthengisi. Bathengisa iikhompawundi ezithembakeleyo nge-CoA kwaye bathumela emhlabeni wonke. Njengazo naziphi na ezinye iziyobisi, ezinye iivenkile zinokufuna iphepha likagqirha ngaphambi kokuba uthenge. Amaxabiso epiracetam anokuhluka ngokuxhomekeka kwindawo.
 Abasebenzi, Iphepha elipinki. UCanzibe 27, 1991 I-Cambridge Neuroscience Ukuphuhlisa iPramiracetam yeWarner-Lambert
 Ukuchongwa kweDatha ye-Orphan yeDrams kunye nokuVunywa kweDathabheyisi ku-Agasti 2, 2015
 Drugs.comIdrugs.com Uluhlu lwamazwe aphesheya lwepramiracetam Ikhasi elifikeleleke ngo-Agasti 2, 2015
 UAteri et. al. Ijenali yamazwe aphesheya yophando lwekhemesti yezonyango, i-12 (3), 129-132 (1992-1-1)
 Amava ekusetyenzisweni kwepramistar, ulungiso olutsha lwe-nootropic, kunyango lokuphazamiseka kwememori kwizigulana ezine-cerebrovascular pathology. 2003 Dec.
 Ukusetyenziswa kweearhente ze-nootropic kunyango oluntsonkothileyo lwezigulana ezinesixinzelelo sobuchopho. I-2008 ngoMeyi 30.
Ngaba u-Orlistat usebenza njani njengechiza lokuLawula ilahleko?	ICurcumin Derivative J-147 yonyango i-AD, yokuguga, yoxinzelelo kuxinzelelo (MDD)